मलेसियामा किन हराउँदै छन् नेपाली युवा-युवती ? हेर्नुस् यस्तो छ कारण ! - jagritikhabar.com
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मु द्दामा जे”ल पर्नु, पे्रम सम्बन्ध, पारिवारिक मन”मुटा”व, रोजगारीकै क्रममा विदेशमा मृ”त्यु, दु”र्घटनामा पर्नु, घरेलु कामदारको हकमा रोजगारदाताले ब”न्दी बनाउनु, व्यक्तिगत चाहनालगायत कारणबाट विदेशिएका नेपाली परिवारको सम्पर्कमा नआएका बुझिएको छ ।
यो त उजुरी परेकाको मात्र संख्या हो । अन्य उजु,री नपरेका धेरै नेपालीका परिवार अझै आफ्ना आफन्त कुरेर बसिरहेका छन् ।मुस्लिम देश भएर पनि मलेशियामा कानुन निकै खुकुलो छ । यहि खुकुलो कानुनको फाईदा उठाएर मलेशिया पुगेका केहि नेपालीहरु मोजमज्जा र रस-रमाईलोमा भुल्ने गरेका छन् ।
यि होटल रेष्टुराँ तथा क्लबहरुमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नकै लागी महिला कामदारहरु राखिएका छन् । परिवार र श्रीमती छोडेर जवानीमा विदेश भाशिनेहरु यिनै महिला कामदार संग जिस्कने र रमाईलो गर्न पाउने आसमा ति होटल रेष्टुरा पुग्नेगरेका छन् । नेपालीहरु द्वारानै संचालित यस्ता होटल रेष्टुराँहरुमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नको लागी नेपाली युवतीहरु नै प्रयोग हुनेगरेको पाईएको छ। वेटरका रुपमा कार्यरत यस्ता युवतीहरु कमाई बढाउन यौ”न ध न्दामा संलग्न हुनेगरेको पाईएको छ ।
नेपालीहरु रोजगारीको लागी मलेशिया गए जस्तै रोजगारीकै लागी मलेशुया आउने ईन्डोनेशियनहरुको संख्या ठुलो छ । विशेष गरि हल्का सामाग उत्पादन हुने कम्पनीहरुमा यस्ता ईन्डोनेशियन युवतीहरु कार्यरत छन् !